Gobolka Geeska Afrika Oo U Muuqda Inuu Dagaal Qabow Ka Socdo Iyo Dareen La’aanta Somaliland | Hayaan News
Xaaladda Taagan Ayaa Ciir-ciir Gelisay Siyaasadda Arrimaha dibedda ee dalalka Bariga Afrika
Hargeysa (Geeska) – Gobolka Geeska Afrika ayaa u muuqda inuu ka bilaabmay wax u Eg Dagaal qabow, ka dib dagaalkii ay Itoobiya ku burburisay Maamulka TPLF.
Raysal-wasaaraha Itoobiya Abiy Axmed wuxuu u muuqdaa inuu aad uga shakisan yahay dalka Koonfurta Suudaan oo dhawaan marti-geliyey Madaxweynaha dalka Masar iyo Wefti uu hoggaaminayey oo socdaal ku yimid, iyadoo la ogyahay ismari waaga guunka ah ee u dhexeeya Qaahira iyo Addis Ababa.
Madaxweyne Ismaaciil Cumar Geelle oo khabiir ku ah siyaasadda Gobolka Geeska Afrika ayaa inkasta oo aanu qayb ka ahayn isbeddellada ka socda Gobolka, haddana hadal uu dhawaan jeediyey wuxuu Raysal-wasaare Abiy Axmed ku taageeray dagaalkii TPLF, isagoo sheegay inay waajib tahay in Abiy Axmed uu cagta mariyo TPLF.
Raysal-wasaaraha Itoobiya ayaa Madaxweynaha Uganda oo isku arka Odayga Bariga Afrika ka diiday inuu dhexdhexaadin ka dhex bilaabmayo isaga iyo Madaxda Jabhadda TPLF, taasina waxay sheegaysaa inaanu xilligan Madaxweynaha Uganda Yuweeri Musatafni ku caloolsamayn sida uu Abiy Axmed wax u wado.
Wasiirka Arrimaha dibedda Somaliland ayaa xilligan dalka kaga maqan safar dibedeed.